CDC Hutano Nongedzo: Hazvina kukwana zvakakwana kuCarnival Cruise Line
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » CDC Hutano Nongedzo: Hazvina kukwana zvakakwana kuCarnival Cruise Line
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Kurwisa • Hurumende Nhau • Health News • Nhau Dzakanaka • nhau • Kuvakazve • chengetedzo • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • USA Kuputsa Nhau
25 min kuverenga
Carnival Cruise Line Inofara. Chengetedzeka. zvirevo nemaitiro zvakagadzirwa mukutaurirana nenyanzvi dzezvekurapa. Iwo akagadzirirwa kuti ave anoshanda uye anochinjika sezvo izvo zvazvino ruzhinji hutano mamiriro anochinja.
Kusvikira paine chimwe chiziviso, mashandiro ese eCarnival achasangana neyakajairwa iyi kuitira kuti cruise liner ibudirire kutangazve mashandiro uye chengetedza kuvimba kwenzvimbo dzavanoshanyira uye kuendesa pane avo mafambiro uye zviitiko zvevaenzi.
Carnival Cruise Line ndiyo yekutanga ngarava yekuisa ngarava kubva kuPort yeBaltimore kubvira indasitiri-yakakura kumbomira mukushanda.
Carnival Pride yakagadzirirwa kusimuka nhasi munzira yemazuva manomwe kuenda kuBahamas, ichishanyira nzvimbo dzinozivikanwa dzeNassau, Freeport uye chitsuwa chakazvimirira cheHalf Moon Cay.
Vasati vaenda, chiitiko che "Kudzoka Kumafaro" chakaitirwa munzvimbo yekupedzisira panguva iyo Mutungamiri weCarnival Christine Duffy, Carnival Pride Captain Maurizio Ruggiero uye Port weBaltimore Executive Director William P. Doyle vakacheka ribhoni remhemberero uye vakatambira zviri pamutemo vashanyi vekutanga vaive mubhodhi. .
"Tinofara kudzokera kuBaltimore, tichipa vaenzi vedu zororo rekuzorora ravanga vakamirira nemoyo murefu asi vachitsigira hupfumi hwenzvimbo uye nekupa vashandi vedu mukana wekutsigira mhuri dzavo kumusha," akadaro Christine Duffy , purezidhendi weCarnival Cruise Line. "Baltimore anga ari shamwari yakanaka kweanopfuura makore gumi uye tinofara kudzokera kuKutandara mumusika uyu wakakosha unoshumira mazana ezviuru zvevaenzi kuNortheast pamwe neAtlantic Coast."
"Izuva rakazonaka kuPort yeBaltimore!" akadaro Port weBaltimore Executive Director William P. Doyle. “Takamirira nguva yakareba kuti titambire zvakare Carnival Pride kuCharm City. Baltimore's Cruise Maryland inotyisa - yedu cruise terminal iri kure kure Interstate 95 uye BWI Thurgood Marshall Airport ingori maminetsi gumi nemashanu kubva. Nzvimbo yekufambisa ngarava inogara padhuze neBaltimore yepasirese Inner Harbor, pamwe neFederal Hill, Fort McHenry, uye Fells Point. Kune zvakawanda zvekuona nzvimbo, yekudyira, uye yekutengesa sarudzo. Saka kufamba uchibva kuBaltimore, kunakidzwa neguta redu guru, uye kuenda kune mamwe eparadhiso dzinotyisa pasi rose. ”
Carnival Cruise Line yakatanga chirongwa chegore rekutanga-kubva kuBaltimore muna2009 uye kubvira ipapo yakatakura vanopfuura miriyoni imwe chete, zvichiita kuti Carnival ive nhamba yekutanga yekufambisa kubva pachiteshi.
MunaNovember, ngarava nyowani, Carnival Legend, ichatsiva Carnival Pride muBaltimore apo Carnival Pride inoshanduka kuenda kubva kuTampa.
Carnival inopa yakanyanya kuwanda nzira yezvikepe kubva kuBaltimore, kusanganisira:
Mazuva matanhatu- uye manomwe-mazuva kufamba nechikepe kuenda kuBermuda neThe Bahamas
Nzendo dzemazuva masere kuenda kuCanada / New England neCaribbean
Mazuva gumi nemana Carnival Nzendo dzekufamba kuenda kuPanama Canal uye yekunze kwekumaodzanyemba kweCaribbean.
Rwendo rweCarnival Sailabration mukati meCarnival Legend munaKurume 2022nezvakakosha zviitiko zveboardboard uye varaidzo pamwe neCarnival Cruise Line's 50th Mhemberero dzekuzvarwa.
Maitiro eCarnival anoshanda anodarika zvinokurudzirwa neUS Centers for Disease Control and Prevention.
Carnival ichaenderera mberi nekufambisa majekiseni echirwere sezvakatsanangurwa neCDC, kusanganisira kuve nevashandi vese vakabaiwa zvakakwana.
Mune yakawanda yekuchenjerera uye mukupindura kuwanda kuri kuitika kwezviitiko zve COVID-19 muUS zvakakonzerwa neiyo Delta musiyano, Carnival yanga ichivandudza zvirongwa uye zvinodikanwa maererano neye pre-cruise kuyedzwa kwevakazara vachengeti vaenzi uye onboard maski mutemo.
Carnival inotarisira kuti matanho aya achave echinguva uye ichagadzirisa zvirongwa zvedu zvichienderana nezano revanoona nezvekurapa uye neruzhinji varairidzi vehutano.
Heano matanho akagamuchirwa uye akaudzwa neCarnival Cruise Line
Vese vashanyi vanofanirwa kunyatsoongorora pre-booking uye pre-kufamba mazano ehutano pane yedu webhusaiti uye US Centers for Disease Control and Prevention's (CDC) webhusaiti .
PAMUSORO POKUDZIDZA BHODZI: Kuti tikwanise kufambisa ngarava dzakabayiwa majekiseni, zvakakosha kuti vese vashanyi vatarise kune iwo mubvunzo mumwe pre-cruise jekiseni rekusimbisa email iyo inoda kuzadzikiswa kune wese munhu ari pakachengeterwa. Vashanyi vanokumbirwa kuti vagadzirise chimiro chavo paCarnival.com neruzivo rwavo rwazvino rwekufambidzana sezvo tichizenge tichikurukura kuburikidza nemaemail akateedzana. Ndokumbirawo kuti muverenge tsamba dzedu dzese uye pedzisai zvese zvikumbiro zveruzivo rwekubhodhi. Kukundikana kutevedzera pre-cruise ruzivo zvikumbiro panguva yakakodzera kunoguma nekudzimwa.
VACCINATION & KUEDZA MAZANO
Vashanyi Vakazara Zvakakwana
Zvirwere zvinodzivirirwa zviripo kune vashanyi vakagamuchira dosi yavo yekupedzisira yeakagamuchirwa COVID-19 jekiseni mazuva gumi nemana zuva rechikepe risati rasvika uye vane humbowo hwejekiseni.
Kune ngarava dzinobva munaGunyana 12, 2021, vachengeti vakazara vachena vanofanirwa zvakare kupa mhedzisiro yakaipa yeiyo COVID-19 bvunzo (PCR kana antigen) yakatorwa mukati memazuva matatu isati yatanga. Semuenzaniso, kana kufambisa chikepe kuri Mugovera, muyedzo unogona kutorwa chero nguva kubva Chitatu kusvika Chishanu. Vaenzi vanogona zvakare kutora bvunzo mangwanani ekutanga chero ivo vachivimbiswa kuti vagamuchire mhedzisiro yavo bvunzo nguva yavo yekupinda isati yasvika.
Kubudirira nekufamba nechikepe kubva munaGunyana 13, 2021, iyo CDC inoda pre-cruise kuyedzwa kwevakabayiwa majekiseni kutorwa mukati memazuva maviri zuva risati rasvika. Kana kufambisa chikepe kuri Mugovera, bvunzo dzinogona kutorwa neChina neChishanu, uye kusvika Mugovera, kana iwe ukavimbiswa kugamuchira mhedzisiro yako munguva yekupinda-mukati.
Uchapupu hwekubaya nhomba, seinotevera, hunodiwa pachiteshi pamberi pekukwira:
Chinyorwa chekutanga chekudzivirira chakaburitswa nezviremera zvehutano zvemunyika izvo zvakapa mushonga (kureva, US CDC's Vaccination Record Card). Makopi kana mapikicha haagamuchirwe.
Dhijitari COVID-19 Chitupa (QR kodhi inogamuchirwa), rekodhi yekubaya COVID-19 kubva kune wehutano mupi
Zita uye zuva rekuzvarwa pane rekodhi rekudzivirira rinofanira kuenderana nemagwaro emufambi uye kuratidza kuti muenzi akazara jekiseni. Mazuva ekudzivirira anofanirwa kuratidza kuti muenzi apedza madosi anodiwa pasati papera mazuva gumi nemana zuva rekutyaira risati rasvika. Izvi zvinoreva kuti pazuva rekutanga, mazuva gumi nemashanu achange apfuura kubva pakagashirwa muyero wekupedzisira. Rudzi rwejekiseni, mazuva akapihwa, uye nhamba dzemujenya dzinofanira kunge dzichinyatso kuoneka.
Tinokurudzira vashanyi vane ruzivo rwekuonana (email nefoni) zviripo zviripo kubva kune wehutano mutapi kana kiriniki saiti iyo yakapa chitupa, kuitira kuti ishandise jekiseni kana zvichidikanwa. Iyo yekudzivirira registry saiti inogona zvakare kushandiswa.
Vashanyi vanokurudzirwa zvakanyanya kuti vaongorore marekodhi avo ekudzivirira uye vanoona kuti vanosangana nematanho edu, uyezve vane humbowo hwezvakanaka zvavakaitwa COVID-19 bvunzo, vasati vaenda kunzvimbo yekufambisa kuti vadzivirire mamiriro ezvinhu avanotadza kufamba uve unokodzera kudzoserwa.
Kune rwendo rwekubva kuUS, iyo CDC inoda majekiseni maviri ari maviri-madhizaini akateedzana kunge akafanana. Ivo zvakare vanobvuma kusanganisa mRNA majekiseni chete (Pfizer neModerna). Hakuna mumwe mubatanidzwa wekudzivirira unosangana nezvinotarisirwa kuti zviongororwe zvizere. Semuenzaniso, veCanada kana vamwe vashanyi vepasirese vakagamuchira mubatanidzwa weAstraZeneca naPfizer vanoonekwa sevasina kubayiwa nenjodzi neCDC. Vashanyi vasina kubayiwa zvakakwana, maererano nemaitiro aya, vanozotorwa sevasina kubayiwa nhomba uye vanofanirwa kunyorera kuregererwa kwekudzivirira.
Vashanyi Vasina Kuvhenekerwa - Kuregererwa Kumatanho Ekudzivirira
Zvinotarisirwa kuti ngarava dzechikepe zvipinde mumachiteshi kunze kweUS zvinoramba zvichichinja uye Carnival Cruise Line inofanirwa kushanda izere nemitemo iyi. Mishonga yekuregererwa kwekufamba kwechikepe kuenda kuCaribbean kunoganhurirwa kune vashoma kwazvo vana vari pasi pegumi nemaviri, uye vechidiki nevakuru vane chirwere chekurapa vanogona kupa chisimbiso chakanyorwa kubva kumupi wavo wezvekurapa kuti havagone kubaiwa majekiseni nekuda kwezvikonzero zvekurapa. Kufamba kwechikepe kwedu kubva kuFlorida, Texas, Louisiana, uye Maryland kuchashanda pasi pezvirevo izvi kusvika Zvita 12, 31 pamwe nekufungidzira kuti zvirango zviripo nekuchinja zvinoiswa nenzvimbo zvicharamba zviripo.
Kuregererwa kwejekiseni kune ngarava dzinobva kuLong Beach, California kucharamba kuchigamuchirwa kune vana vari pasi pegumi nemaviri uye sezvinodiwa nemutemo weUS (mune pekugara kwezvikonzero zvekurapa uye nemabatiro echokwadi echitendero).
PaCarnival Miracle® kubva kuSeattle; Carnival Pride® Gumiguru 31, 2021 kubva kuBaltimore; Carnival Glory® Mbudzi 28, 2021 kubva kuNew Orleans; uye Carnival Miracle® Mbudzi 28, 2021 kubva kuLong Beach, kuregererwa kwejekiseni kuchagadziriswa chete sezvinodiwa nemutemo.
Kuregererwa kwevana nevakuru hakuna kuvimbiswa uye kugona-kudzorwa kunoenderana nehuwandu hwenhamba yevaenzi vakabaiwa vanofungidzirwa kuve vari muchikepe. Vashanyi vasina kubayiwa vakapihwa mukana wekuregererwa vanofanirwa kutevedzera zvimwe zvinodiwa uye maprotocol, ayo anosanganisira:
Kupa yakaipa PCR COVID-19 bvunzo pakunopinda-mukati, inotorwa pakati pe72 nemaawa makumi maviri nemana isati yasvika nguva yekufambisa (semuenzaniso, kana chikepe chiri Mugovera, bvunzo inogona kutorwa chero nguva kubva Chitatu kusvika Chishanu, asi kwete mangwanani ekutanga). Vashanyi vasina kuvharirwa vanofanirwa kutora imwe antigen bvunzo kutanga, uye kuyedza zvakare mukati maawa makumi maviri nemana ekumisikidza pane ese mafambiro akareba kupfuura mazuva mana. Mari inosvika US $ 24 pamunhu inobhadhariswa ichaongororwa kune muenzi ari mubhodhi reSail uye Saini account kubhadhara mutengo wekuyedza, kuburitsa uye hutano uye kuchengetedzwa kuongorora. Vana vari pasi pemaviri vakasunungurwa kubva pakuedzwa zvinodiwa.
Kufamba Inishuwarenzi Inodikanwa - Florida neTexas Yakavakirwa Ngarava
Vashanyi vasina kuvharirwa vachifamba nechikepe chiri kubva kuFlorida kana Texas vanofanirwa kuratidza humbowo hwekufambisa inishuwarenzi yekufamba panguva yekupinda. (Ona chikamu pazasi kuti uwane zvizere nezve inishuwarenzi yekufamba.)
Chiremba Chirevo - Florida, Texas, Louisiana, uye Maryland Yakavakirwa Ngarava
Kana iwe wakagamuchira kuregererwa kwejekiseni nekuda kwezvikonzero zvekurapa, tsamba kubva kumubatsiri wezvechiremba inotaura kuti muenzi haagone kubaiwa majekiseni nekuda kwezvikonzero zvekurapa inofanirwa kuiswa mukutarisa.
Mahombekombe Anoshanya uye Mafambiro
Vashanyi vasina kugadzirwa havagone kuenda kumahombekombe mumachiteshi ekufona vega. Vashanyi vanogona kungo nyura mumachiteshi ekufona kana vakanyoreswa parwendo rweCarnival-rwakatsigirwa nebhuruu.
Carnival-inogamuchirwa bubble mafambiro mafambiro anoshanda munzvimbo inodzorwa. Vashanyi vanozoperekedzwa kubva muchikepe kuenda parwendo rwavo uye kudzokera kuchikepe nekukurumidza pavanodzoka kubva kumahombekombe ekufamba. Hapana mirau isina kurongwa inobvumidzwa (kureva, zvitoro zvezvipo, mabhawa, maresitorendi, nezvimwewo).
Muchiitiko chaunosarudza kusatenga bhuru rekushanyirwa, maratidziro ebubble anotengeswa kunze, kana kukanzurwa nekuda kwemamiriro ekunze, vashanyi vasina kubayiwa vachena vanofanira kugara mubhodhi.
Vashanyi vari kutora chikamu murwendo rwe bubble, zvisinei nemamiriro ejekiseni, vanofanira kuteedzera zvese maratidziro ekushanya uye kutungamira kwenzvimbo maererano nekuyedza / kuongorora, kupfeka chifukidzo, kusimudzira muviri, nezvimwewo. kushanya. Semuenzaniso, zvichibva pachibvumirano chedu neSan Juan, vashanyi vasina kubayiwa vachena vanofanira kugara mubhodhi panguva yekushanya kwedu ikoko.
Vashanyi vasingateedzere nharaunda inodzorwa ye bubble tour vanozobviswa parwendo.
Kana chikepe chako chikashanyira chiteshi chega chega chekufona, senge Half Moon Cay uye Princess Cays, vashanyi vasina jekiseni vanogona kuenda kumahombekombe vari vega kana kutenga chero rwerwendo rwedu.
Ndapota shandisai yedu Dzokera kune Service FAQs kune runyorwa rwakakwana rwezvinyorwa zvedu nezvinodiwa, izvo zvinoramba zvichichinja uye zvinogona kuchinja pasina ziviso isati yaitika.
Chikumbiro chekuregererwa-chinzvimbo-chinogoneswa chinofanirwa kuendeswa mukati maawa makumi mana nemasere ekugadzirisa patsva. Zvikumbiro zvichagadziriswa mushure mekubhadharirwa kwabhadharwa zvakazara, muchirongwa chengarava, uye kana tangopedzisa iyo inofungidzirwa kubaiwa jekiseni revaenzi.
Kana iwe uri muenzi asina kucheneswa, kusungirirwa kwako hakufungidzirwe kusimbiswa kunze kwekunge wawana kuregererwa kwakatenderwa, kuchapihwa mukati memazuva gumi nemana ekufamba nechikepe. Chero vashanyi vasina kubayiwa majekiseni avo vanobvisirwa mvumo vanobvumidzwa kuongorora uye kubvuma kune zvese zvinorambidzwa nemitemo yakanyorwa pamusoro apa vasati vakwira chikepe.
Kana isu tisingakwanise kubvumidza chikumbiro, vashanyi vanozove nesarudzo yekudzima muenzi asina kuvhenekerwa (s) kubva pakachengeterwa, kuenda kune ramangwana zuva rekufamba nechikepe kana kukanzura nemari yakazara kune iyo yekutanga fomu yekubhadhara. Nehurombo, hatigone kubatsira nemari inoshandiswa ine chekuita nechikumbiro chakarambidzwa, uye vashanyi vanofungidzira njodzi dzese dzine chekuita nemari dzisingadzoswi dzekufambisa (kureva, mari yemhepo, hotera).
Isu tinoziva kuti vaenzi vasina kucheneswa vachatarisana nezvirambidzo zvenguva pfupi panguva yekutanga chikamu chedu chekutanga, pamwe nemari yekuwedzera yekuyedza uye inishuwarenzi uye vane tarisiro yekuti maprotocol aya acharamba achichinja nekufamba kwenguva.
Vese vashanyi vanofamba vachidzokera kumashure kumashure, zvisinei nemamiriro ejekiseni, vachada kuyedzwa pakati penzendo.
KUFAMBA INSURANCE INODIWA YEMAHARA ASINA KUVHARA - FLORIDA & TEXAS BASED SHIPI *
Vashanyi vasina kuvharirwa vachifamba nechikepe chiri kubva kuFlorida kana Texas vanofanirwa kuratidza humbowo hwekufambisa inishuwarenzi yekufamba panguva yekupinda. Izvi zvinodiwa parizvino zviri kuregererwa vana vari pasi pegumi nemaviri vasina kukodzera mushonga. Zvisinei, vabereki vanorayirwa kuti kutenga inishuwarenzi yekufambisa yevana vavo kunokurudzirwa zvakanyanya.
Mitemo inodiwa: hushoma emadhora US $ 10,000, pamunhu, mubhadharo wekurapa kufukidza uye US $ 30,000 kufukidza kwekukurumidza kurapwa kwekurapa uye pasina COVID-19 kusiiwa.
Inishuwarenzi inofanirwa kutumidza zita remuenzi asina kucheneswa semubati wemutemo kana mubatsiri uye inogona kutengwa kubva kukambani yeinishuwarenzi yekufamba yekusarudzwa kwemuenzi kana kuburikidza neCarnival Vacation Protection, iyo inosanganisira kufukidzwa kunodiwa.
Carnival Vacation Dziviriro inowanikwa yekutenga kusvika mazuva gumi nemana isati yaenda nechikepe kune vashanyi vanogara muUS (kusanganisa New York nePuerto Rico), Canada (kusasanganisa Quebec), US Virgin Islands (St. Thomas, St. John neSt Croix) uye American Samoa. (Cherekedza: kubhuka kwako kunofanira kubhadharwa nemari yeUS.) Kana iwe uchishuvira kutenga Carnival Vacation Dziviriro, ndapota fonera 14-1-CARNIVAL, yako Yega Zororo Kuronga, kana wako wekufamba chipangamazano.
Vashanyi vasina kurapwa vasina humbowo hunodiwa hweinishuwarenzi havatenderwe kufamba nechikepe uye hapana mari inodzoserwa.
* Kubva pane zvinodiwa nedzimwe nzvimbo. Dzimwe nzvimbo dzekuenda kwatinofamba nechikepe dzinoshandiswa neCarnival dzakabatana masangano pasi pezvibvumirano zvehurumende kana marezinesi.
ZVINOKOSHA ZVEMAHARA ZVIRWERE
Vese vashanyi vachakumbirwa kuti vapedzise online online questionnaire maawa makumi manomwe nemaviri vasati vafamba nechikepe uye vachienda kunovhenekwa vasati vatanga kuongororwa kwehutano, izvo zvinosanganisira kusimbiswa kwekupindurwa kwavo kwehutano, kusimbiswa kwemagwaro avo ekudzivirira uye chero kudiwa kwekuongorora kweCOVID-72.
Tichataura chero munhu ane zviratidzo nezviratidzo zve COVID-19, kana vanozivikanwa vari panjodzi, yekuwedzeredzwa kuongororwa kwekurapa vasati vatendera kukwira. Vashanyi vanoonekwa nevashandi vedu vekurapa uye boarding ichatenderwa pamaonero avo. Sekondari kuongorora (uye kuongorora kwehutano mukati mechikepe) kunoitwa kana zvichidikanwa.
Chero muenzi anoedza zvakanaka pakutanga, uye vamwe vavanofamba navo mune imwecheteyo stateroom, pamwe chete nevamwe vepedyo vokukurukura, havazokwanise kufamba uye vanozopihwa ramangwana rechikepe chikwereti. (Kusangana kwepedyo chero munhu anga ari mukati memamita matanhatu emunhu ane hutachiona / ane chiratidzo chekuwedzera huwandu hwemaminetsi gumi nemashanu kana kupfuura pamusoro pemaawa makumi maviri nemana mukati memazuva gumi nemana asati aenda nechikepe.)
Mutemo weCarnival Cruise Line ndeyekuti munhu wese anofanirwa kubayiwa nhomba, iine nhamba shoma kwazvo yekusiyiwa kwevana vari pasi pegumi nemaviri uye avo vasingakwanise kubaiwa jekiseni. Maitiro aya anodarika zvinodikanwa zvekubaya majekiseni pasi pechirongwa cheCDC, uye zvinosangana nezvinodiwa nenzvimbo dzatinofamba nechikepe.
Pamusoro penzendo dzakabayirwa majekiseni, takaita zvirongwa zvakawandisa sechikamu chekutanga kwedu, tiine zvido zvehutano nekuchengeteka kwevaenzi vedu, vashandi pamwe nenzvimbo dzatinoshandira seyedu yekutanga kukosha. Nekuda kwekubuda kwenyaya dze COVID-19 dzinoitika munyika yese pakati pevaya vakabaiwa majekiseni, zvido zvedu zvekuyedza ngarava zvakawedzeredzwa kusanganisira VOSE vashanyi. Isu takawedzerawo zvido zvedu zvemask zvinoda kuti vashanyi vapfeke masiki mukati mezvimwe nzvimbo dzakapoteredzwa nenzvimbo dzinoungana vanhu.
Kunyangwe nema protocol aya aripo, panogona kunge paine yakanaka COVID-19 kesi pabhodhi panguva yako cruise. Ngarava dzedu dzine nzvimbo dzekurapa dzine hunyanzvi hwekuongorora uye kuyedza uye dzakagadzirirwa kutsvaga kwekubata. Vashandi vedu vakabaiwa jekiseni uye vanopfeka masiki mumba nguva dzose. Tichifunga maprotocol edu, zviitiko zvakanaka zviri pazasi peizvo nharaunda dziri kusangana nemhenderekedzo yegungwa. Nekudaro, zvakapihwa musiyano weDelta urikukonzera kusimuka kwezviitiko pakati pevanhu vakabayiwa jekiseni, zvakakosha kuti iwe uzive zvinotevera ruzivo.
Muchiitiko apo vaenzi vanenge vari padhuze nekubatana kana kuratidzwa kune chero muenzi kana nhengo yevashandi vanoongorora zvakanaka kune COVID-19, kana kuratidza chero zviratidzo zvehurwere hwakaita seCCVID panguva yechikepe, ivo nevavanoshamwaridzana navo vanodikanwa kuti vawedzere kuyedza uye kungangodikanwa kuti vazvitsaurire voga mu stateroom yavo kudzamara timu yedu yekurapa yaona kuti zvakachengeteka kwavari kuti vatangezve zviitiko zvavo zvengarava.
Kana vashanyi vakafamba nendege kuti vabatanidze rwendo rwavo uye bvunzo dzakanaka pakutanga uye vasingakwanise kufamba - kana kuyedza kwakanaka panguva yechikepe - ivo pamwe nevavanosangana navo padhuze vangangodikanwa kuti vagare vega vasati vaenda kumba.
Vashanyi vakaiswa kwavo voga mubhodhi vanogashira pro-ratidziro yeramangwana cruise kiredhiti yakaenzana nenhamba yemazuva muchivhariso.
Kune vashanyi vanofanirwa kugara vega kunzvimbo yavo, Carnival ichabatsira kuronga kwega; zvisinei, zvese zvine chekuita nemari inova basa revashanyi.
MASKI & KUSVIRA KWEMAZUVA
Tinokurudzira zvikuru vaenzi vese kuti vapfeke masiki ekumeso pavanenge vari mumba, kunyanya vashanyi vasina kubayiwa, kusanganisira vana vari pasi pemakore gumi nemaviri vanofanirwa kupfeka masiki munzvimbo dzinowanikwa veruzhinji, kunze kwekudya kana kunwa. Vese vashanyi vane makore maviri zvichikwira vanozodikanwa kupfeka masiki ekumeso mumachikichori uye munzvimbo dzakatarwa dzemitambo yekuvaraidza, zvitoro zvese zvekutengesa, uye mukasino, kunze kwekudya kana kunwa. Vashanyi vanodikanwa kupfeka masiki ekumeso vasati vagara mumakamuri edu ekudyira makuru uye munzvimbo yeLido Buffet uye pano neapo mune dzimwe nzvimbo dzakatarwa panogona kuungana nhamba huru yevaenzi (zviratidzo zvichatumirwa). Pamusoro pezvo, masiki anodikanwa munzvimbo dzakakomberedzwa dzechikepe senge spa, salon, uye pane chero chiitiko chemumba nevana vane makore ari pasi pegumi nemaviri (kureva., Vaka-A-Bear®, Mhuri Harbor uye Sky Zone®).
Vese vashanyi vanofanirwa kupfeka masiki panguva yese yekutangisa uye yekumisikidza nzira (kumba chiteshi uye zviteshi zvekufona, kusanganisira onboard pre-debarkation maitiro), panguva ipi neipi yeCarnival-inogamuchirwa kumahombekombe ekufamba uye vachiri pane chero mota dzekutakura, kusanganisira mvura shuttles. Pamusoro pezvo, kana uchienda kumahombekombe, vashanyi vanofanirwa kunge vakagadzirira kuteedzera kwese hutungamiriri hwemuno maererano nemasiki uye kureba kwemuviri. Mamiriro enhungamiro emuno anozogoveranwa nevashanyi pasati pasvika debarkation kwairi kuenda.
ONA: Vakuru vehutano veAlaska vanoongorora mamiriro ezvinhu kumahombekombe vakurudzira zvakasimba kuti vese vashanyi, kusanganisira avo vakabaiwa jekiseni, vapfeke chifukidzo chemeso nguva dzese pavanenge vari mumba uye nekunze kana kureba kwemuviri kusingakwanise kuchengetedzwa. Mitemo yeUS inoda kuti vanhu vese vapfeke chifukidzo pachiso pazvifambiso zveruzhinji zvinosanganisira mabhazi, zvitima, mabhazi, nhandare, nendege uye zvikepe zvezuva.
Vagonyeti vaenzi havafanirwe kuchengetedza panyama panyama muchikepe.
Zvinokurudzirwa kuti vasina kuvhenekerwa vashanyi vanochengetedza kuwonekera kwemuviri nenzira inotevera:
Mumba - Ramba uine tsoka nhanhatu kubva kune vamwe kwete muboka rako revafambi. Saka nekudaro, tinokukurudzira kuti utore masitepisi pazvinogoneka, kana uchigona kudaro.
Kunze - Ramba uine tsoka nhatu kubva kune vamwe kana usina kupfeka mask uye kwete muboka rako revafambi.
Zvirongwa zvevechidiki & SKY ZONE®
Camp Ocean ™: Zvirongwa zvevana zvinotarisirwa zvevana vari pasi pemakore gumi nemaviri muCamp Ocean hazvizopiwe panguva ino.
Denderedzwa "C" ® & CLUB O2®: Vechidiki vasina kuyaruka uye vechidiki havazobvumidzwa kutora chikamu mune inotarisirwa Circle "C" uye CLUB O2 zvirongwa zvevechidiki, kana kupinda Sky Zone® kana uchifamba paCarnival Panorama®.
CASINO - YAKADZIDZWA SEPTEMBER 8, 2021
Kusimudzira kuchengetedzeka, kureba kwemuviri uye hutano hweveruzhinji, isu takagadzirisa edu epabhodhi kasino protocols, anoshanda Mugovera, Gunyana 11.
Casinos ndeyevatambi vanoshanda uye vamwe vavo chete; hapana kuungana mumakasino neimwe nzira.
Zvigaro pamatafura emitambo nemitambo zvakachengeterwa vatambi chete.
Iko hakuna kusvuta mukasino kunze kwekunge iwe wakagara uye uchitamba.
Kusvuta hakuzobvumirwe mukasino kana kwavharwa.
Vashanyi vachatarisirwa kupfeka fashoni kutoti vari kuputa kana kunwa chinwiwa chavo.
Iyo kasino bhawa yakavharwa; zvinwiwa zvichaendeswa kune vatambi vekhasino nevashandi vedu vebhawa.
Isu tinotenda vatenzi vedu 'rutsigiro rwezvirongwa izvi zvakaitwa neese munhu wese akanyanya kufarira mupfungwa.
ZVAKAITIKA ZVENYANZVI PASI PASI
Vagadziri vaeni vanogona kutora chikamu mumaCarnival-anofambiswa maratidziro uye akazvimirira ekuona nzvimbo. Vashanyi vasina kugadzirwa havagone kuenda kumahombekombe mumachiteshi ekufona vega. Vashanyi vanogona kungo nyura mumachiteshi ekufona kana vakanyoreswa parwendo rweCarnival-rwakatsigirwa nebhuruu. Nekudaro, kana rwendo rwavo rwekushanyira chiteshi chega chega chekufona, senge Half Moon Cay uye Princess Cays, vashanyi vasina jekiseni vanogona kuenda kumahombekombe vega kana kutenga chero rwerwendo rwedu.
Zvichava zvakafanira kutevedzera zvirevo zvehutano zvechiteshi chese chatinoshanyira, chiri pasi pevane masimba emunharaunda uye zvinogona kuchinja pasina ziviso isati yaitika. Vashanyi vanofanirwa kuuya vakagadzirira kuteedzera zvemuno nhungamiro zvine chekuita nemask yekupfeka, kusimudzira muviri, kuyedza / kuongorora kwehutano, nezvimwe.
ONA: Kwatinoenda zvinodikanwa zvinoramba zvichichinja uye zvichibva pachibvumirano chedu chengarava neSan Juan, vashanyi vasina kucheneswa vachatofanira kuramba vari mubhodhi panguva iyoyo yekufona.
HUNOGARA PAMWARI PAMWARI
Ndokumbirawo mutibatsire kuti tigare tiine hutano pabhodhi tichishandisa masinki ekugezesa maoko uye anopepesa maoko panopindwa nenzvimbo uye munzvimbo dzine vanhu vakawanda muchikepe chose. Tichadawo vashanyi kuti vatevere kurairwa kwedu nezvenzira dzekugara uine hutano pabhodhi uye kana kumahombekombe, kuburikidza nehurongwa hwezuva nezuva, masystem ezvekuvaraidza, zviziviso, mu-stateroom zvinyorwa, uye neCarnival HUB App.
Nekuda kwemaitiro matsva ekutanga, vese vashanyi vanofanirwa kuzadzisa Online Check-In uye sarudza Kusvika Kusarudzwa. Online Check-In inowanikwa yeSuite, Platinum uye Diamond vashanyi pamazuva gumi nematanhatu vasati vafamba; kuwanikwa kwakawanda kunotanga pamazuva gumi nemana isati yaenda nechikepe. Izvo zvakakosha kuti vashanyi vasvike panguva yakakodzera sezvo vanosvika kwekutanga vasingakwanise kupihwa pekugara uye vachizokumbirwa kuti vadzokere panguva yavo yakatarwa. Nekubatana kwemunhu wese, tinogona kushanda pamwe chete kuti tipe kuvimbisa kwekubva-nguva uye kutanga kwezororo rako!
ZVIRONGWA ZVOKUDZIDZA KUTI ZVISHANDISE ZVINOTEVERA ZVEMAWERI KUDZIDZA DECEMBER 31, 2021 PASI PEMAZANGANISO EVANHU VAKAPEDZWA:
Carnival Vista® kubva kuGalveston
Carnival Horizon® kubva kuMiami
Carnival Breeze® kubva kuGalveston
Carnival Miracle® kubva kuSeattle
Mardi Gras ™ kubva kuPort Canaveral
Carnival Magic® kubva kuPort Canaveral
Carnival Sunrise® kubva kuMiami
Carnival Panorama® kubva kuLong Beach
Carnival Pride® kubva kuBaltimore; Kufamba kwechikepe kutanga Nyamavhuvhu 12, 2021
Carnival Dream® kubva kuGalveston; Kufambisa ngarava kutanga Nyamavhuvhu 19, 2021
Carnival Glory® kubva kuNew Orleans; Kufambisa ngarava kutanga Nyamavhuvhu 19, 2021
Carnival Miracle® kubva kuLong Beach; Kufambisa ngarava kutanga Nyamavhuvhu 27, 2021
Carnival Freedom® kubva kuMiami; Kufamba kwechikepe kutanga Gumiguru 9, 2021
Carnival Elation® kubva kuPort Canaveral; Kufambisa ngarava kutanga Gumiguru 11, 2021
Carnival Valor® kubva kuNew Orleans; Kufamba kwechikepe kutanga munaNovember 1, 2021
Carnival Legend® kubva kuBaltimore; Kufambisa ngarava kutanga Mbudzi 14, 2021
Carnival Pride® kubva kuTampa; Kufambisa ngarava kutanga Mbudzi 14, 2021
Carnival Conquest® kubva kuMiami; Kufambisa ngarava kutanga Zvita 13, 2021
Carnival Radiance® kubva kuLong Beach; Kufambisa ngarava kutanga Zvita 13, 2021